ရွှေမှုံရတီကိုချစ်​လွန်းလို့ ကိုယ်​တိုင်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​မယ် ဆိုတဲ့ ​ရွှေထူး ??? – Swel Sone News – NEW
ရွှေမှုံရတီကိုချစ်​လွန်းလို့ ကိုယ်​တိုင်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​မယ် ဆိုတဲ့ ​ရွှေထူး ???
မြန်​မာနိုင်​ငံ တွင်​ မက အ​ရှေ့​တောင်​ အာရှ ရဲ့ အချစ်​တတ်​ဆုံး​ယောကျာ်းလို့ ဆိုရမယ့်​ အဆို​တော်​ ရုပ်​ရှင်​ သရုပ်ဆောင်​​ရွှေထူးဟာဆိုရင်​ဖြင့်​ လက်​တ​လောမှာ သူသိပ်​ချစ်​ရတဲ့ရွှေမှုံ​လေးနဲ့ ပဲ နိုင်​ငံ အနှံ့​ပတ်​​နေခဲ့ပါတယ်။
အချစ်​ကြီးသူ ​ရွှေထူး ဟာ ​ရွှေမှုံ ကို နာကျင်​ထိခိုက်​မှာ အင်​မတန်​ စိုးရိမ်​တဲ့ သူတစ်​​ယောက်​ပါ။အ​သေးစိတ်​က အစ ဂရုစိုက်​သူဖြစ်​ပြီးတစ်​ချိန်​လုံး မိန်းမမျက်​နှာ တစ်​စိမ့်​စိမ့်​ကြည့်​​နေတဲ့ ​ရွှေ​ယောကျာ်း​ကောင်းကြီး​ တစ်​​ယောက်​ဆိုလည်း မမှားပါဘူး..အခုလတ်​တစ်​​လော မှာ ယွန်းဝတီလွင်​မိုးကို အားကျပြီး က​လေး ယူချင်​တဲ့ ​ရွှေမုံတစ်​​ယောက်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​ ဗိုလ်​ကြီးပူရမှာကို အင်​မတန်​​ကြောက်​​နေရှာသတဲ။
ရွှေထူး ကသူ့မိန်းမ ကို ​ပြောလိုက်​တာ​လေးက​တော့ “မိန်းမိန်း ဘာမှ မပူတဲ့ ကျားကျား ကိုယ်​တိုင်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ ​ပေးမယ်​… အရမ်းချစ်​တယ်​”တဲ့။ ရွှေထူး ရဲ့ အချစ်​​တွေက​တော့ အမျိုးသမီးထုကြီး တစ်​ခုလုံးကို အားကျ ​ကြွေဆင်း​စေ​လောက်​ပါ​ပေတယ်​…
Source : thadinyatkwat.com
တေးရေးဆရာဝေကြီးရေးသားထားပြီး ကြည့်ရှုတဲ့ပရိတ်သတ်တွေကိုပါမျက်ရည်ဝဲစေခဲ့တဲ့ ရတနာမိုင်ရဲ့ သီချင်းသစ်
ချစ်ခင်ပွန်း ကိုစစ်နိုင်ရဲ့ ဆိုင်ဖွင့်ပွဲမှာ မိသားစုနဲ့အတူပျော်နေတဲ့ ချစ်သက်
ဇနီးဖြစ်သူ နေမကောင်းလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ရွှေထူး ကိုအနမ်းတွေတဖွဖွပေးနေတဲ့ ရွှေမှုံရတီ
ကိုရီးယားမှာ ရိုက်ကူးရေးပြီးလို့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲနေတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် ရဲ့ ဗီဒီယို